ဝီစကီမီနူး - ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံသဏ္ဌာန်နှင့်အညီ၎င်း၏ပုံပန်းသဏ္adaptာန်ကိုမည်သို့ပြုပြင်မည်နည်း Linux မှ
Whisker Menu: ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသွင်အပြင်ကို Xfce ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ GTK ဆောင်ပုဒ်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုပြင်ပါ
ရေနံချောင်း | | အသွင်အပြင် / ကိုယ်ပိုင်
အချိန်ကြာမြင့်စွာငါအသုံးပြုခဲ့သည် ပါးသိုင်းမွေး Menu ကို panel ထဲမှာငါ့ menu ကိုလိုပဲ Xfce ကျွန်ုပ်၏ဖြန့်ဖြူးမှုအပြောင်းအလဲမည်သို့ပင်ရှိပါစေ၊ သို့သော်မကြာမီကကျွန်ုပ်သည်ညအချိန်တွင်မော်နီတာရှေ့တွင်နာရီများစွာကုန်ခဲ့ရသည်၊ ကျွန်ုပ်အသုံးပြုသောအရာများ၏အရောင်များသည်မဲမှောင်လာသည်။
အစပိုင်းမှာတော့ Whisker ကငါ့ရဲ့ဆောင်ပုဒ်ကိုမသုံးဘူး၊ Gtk, ဒါပေမယ့်ထို့နောက်ငါထွက်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် ၎င်း၏ဖန်တီးသူ၏စကားအားဖွငျ့ဖွစျသညျ ၎င်းကိုပုံမှန် (သို့) ပုံမှန် ၀ င်းဒိုးတစ်ခုအနေဖြင့်အသုံးပြုသည် (၎င်းသည်ဝစ်ဂျက်များအသုံးပြုသောကြောင့် Gtk Menu မဖြစ်နိုင်ပါ။ ) ထို့ကြောင့်အခင်းအကျင်း၏အရောင်များကိုလိုက်နာပါကပြတင်းပေါက်များ၊ menu များနှင့်ကိုက်ညီသောအရာများမဟုတ်လျှင် -
Whisker Menu သည်ပုံမှန် ၀ င်းဒိုးတစ်ခု ဖြစ်၍ ပုံမှန် windows ၏ GTK ဆောင်ပုဒ်နှင့်တူညီသည်။ ၎င်းသည်အသုံးပြုသောဝစ်ဂျက်များကြောင့် (GtkMenu) မဖြစ်နိုင်ပါ (ယုံကြည်ပါ၊ ကျွန်ုပ်ကြိုးစားခဲ့သည်), ဒါကြောင့်၎င်းသည် menu များနှင့်မကိုက်ညီပါ
ဒါပေမယ့်လက်ျာအဲဒီမှာ Graeme ဒီဖိုင်ထဲမှာချိန်ညှိမှတဆင့်အလွယ်တကူပြုပြင်နိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုအသေးစိတ်ဖော်ပြသည် .gtkrc-2.0.
၎င်းသည်လျှို့ဝှက်ဖိုင်ဖြစ်ကြောင်းသတိရပါ (Ctrl + + h o alt+. ၎င်းတို့ကိုဖော်ပြရန်) အသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်း၏ Home directory ထဲတွင်သာဤအရာကိုဖန်တီးပါကမည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြမည်မဟုတ်ပါ
ပုံမှန်အားဖြင့်ဝီစကီ Menu ကို
ထိုအခါငါသူအထက်ပါစာမျက်နှာထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အရသိရသည်အောက်ပါကုဒ်ညာဘက်သို့မဟုတ်အမျိုးအစား panel ကိုနှင့် menu ကိုပြုပြင်မွမ်းမံသည်အတိုင်းပြုလေ၏။ bg နောက်ခံကိုရည်ညွှန်းသည် fg စာသားများဤကိစ္စများတွင်ရှေ့မှောက်၌။ ပြည်နယ် ၃ ခု ပုံမှန်, ACTIVE y အလင်းရောင် ၎င်းတို့သည်မရွေးရသေးသော၊ ရွေးချယ်ထားသောနှင့်ရွေးချယ်ထားသောအခြေအနေကိုအသီးသီးရည်ညွှန်းသည်။
စတိုင်များ၏အမည်များသည်သင်လိုချင်သမျှရှိနိုင်သည်။ Widget ၏အမည်မှန်မှည့်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ကိစ္စတွင်သင်တွေ့နိုင်သည်အတိုင်းငါ menu ၏မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုသိရန်ကူညီပေးသောအမည်များကိုအသုံးပြုသည်။
Whisker Menu အတွက်အရောင်များကိုသတ်မှတ်ပါ
၎င်းသည်ဘယ်ဘက် panel သို့မဟုတ် element များ၏မြင်ကွင်းကိုပြုပြင်ချိန်တွင် -
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ဤသည် input / search box ၏အသွင်အပြင်ကိုပြောင်းလဲစေသည်။
အရောင်များသည်“ စားသုံးသူများ၏အရသာနှင့်ကိုက်ညီ” သောကြောင့်သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုပြင်ပါ။ အပြောင်းအလဲများအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိရန်အတွက် session ကိုပိတ်ပြီး log in လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ သို့သော် အကယ်၍ သင်ကအခက်အခဲများကိုရှောင်ရှားလိုပါကသို့မဟုတ်အရေးကြီးသောအရာများဖွင့်ထားပါက Xfce ဘောင်ကွက်ကိုပြန်လည်စတင်နိုင်သည် xfce4-panel -r
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အသွင်အပြင် / ကိုယ်ပိုင် » Whisker Menu: ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသွင်အပြင်ကို Xfce ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ GTK ဆောင်ပုဒ်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုပြင်ပါ
ကျွန်ုပ် system တွင်အသုံးပြုသော font သည် Candara ဖြစ်သည်။
Candara? Uff, ဒါကအများကြီးတိုးတက်ခဲ့သည်
ဒါဟာ Aller ဖြစ်ဟန် .. ငါဆိုလိုတာကပုံရသည်။
သူက Candara လို့မပြောရင်ငါ Aller Hahaha လို့ထင်လိမ့်မယ်
လှသောအဆင်း!!! ဝီစကီမီနူးသည်ကျွန်ုပ်၏ Xubuntu တွင်မည်မျှရှိနေသည်ကိုကျွန်ုပ်အလွန်နှစ်သက်သည်။ အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ငါလုပ်ရန်ကြိုးစားသည်၊ ၎င်းသည်ဘာမှမပြောင်းလဲခဲ့။ wrong ငါဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုငါမသိ၊ ဖိုင်ကအစမှာမပေါ်လာဘူး။ အခုပေါ်လာတဲ့စက်ကိုပြန်ဖွင့်လိုက်ပြီ။ အခုငါ .gtkrc-2-0 ရှိပြီ။ တစ်ယောက်ယောက်ကငါ့ကိုဘယ်လိုလုပ်ပြောပြရမလဲ။
ဖိုင်နာမည်ကမှားတယ်၊ .gtkrc-2.0၊ နာမည်ပြောင်းပြီး၊ ဆောင်းပါးထဲမှာပြောခဲ့သလိုငါထွက်သွားပါ (သို့) restart လုပ်သင့်တယ်။
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်! အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ၊ ရှင်းလင်းချက်ကိုငါတန်ဖိုးထားတယ် appreciate
ကျွန်ုပ်၏အိမ်၌ .gtkrc-2.0 မရှိခဲ့ပါ၊ ကျွန်ုပ်လုပ်ခဲ့သည်မှာ၎င်းကိုဖန်တီးသည်။
ဝီစကီမီနူးနှင့် ပတ်သက်၍ ကောင်းသောအချက်။ ဒီဝစ်ဂျက်ဟာအခင်းအကျင်းတွေနဲ့စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး။
Icons Theme သည် Numix Circle ဖြစ်သည်။
ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်ကိုအချိန်အတော်ကြာနှောင့်ယှက်ခဲ့သည်။ sharing မျှဝေခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်
အခုကျွန်တော့် Xubuntu ကအများကြီးပိုကောင်းလာပြီ။
ဒါပေမယ့် candara အခမဲ့ repos အတွက်မဟုတ်ပါဘူး !!
ရစ်ချတ်ဒီဖောင့်ကိုအတည်ပြုမထားဘူး !! ဒါကလွတ်လပ်မှုမဟုတ်ဘူး၊
ပုံစံ« Black TreeNumix »
အခြေအမြစ် [NORMAL] = "# 2D2D2D"
အခြေစိုက်စခန်း [ACTIVE] = "# D64937"
စာသား [NORMAL] = "#ccc"
Widget « whiskermenu-window * TreeView * »စတိုင်« Black TreeNumix »
သင် panel ကို log out လုပ်ပြီးပြီလား? ။ သင်အသုံးပြုနေသောကိုးကားချက်များသည်ဖြောင့်သောကိုးကားချက်များသာမဟုတ်ဘဲစာစီစာရိုက်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်းသေချာစေပါ။
မဟုတ်ပါ၊ ဖြေရှင်းပြီးပါပြီ။ ပြproblemနာက gtk theme နဲ့ပါ။ gtk theme နှင့် windows theme အတူတူ၊ မရောနှောဘဲရွေးချယ်သင့်ပါသည်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်😉
Rayonant ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Whisker ကပိုကောင်းတယ်
သင့်တွင်အမြင်အာရုံပြproblemsနာများရှိပါက Redshift ကိုသုံးပါ။
ဒံယလေ sancho ဟုသူကပြောသည်
daniel sancho အားပြန်ပြောပါ
SquidGuard: Arch, Manjaro ဖြင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူပါဝင်သောစာမျက်နှာများကိုပိတ်ပါ။
Centos7တွင် RC ရှိနေစဉ် Fedora ရှိ Wayland ကိုနှောင့်နှေးစေလိမ့်မည်